Portugal 1-0 France CR7 yaa u diidan Laacibka Dunida? – Calan Qaran
July 11, 2016	by Webmaster
Xulka qaranka Wadanka Portugal ayaa taariikh u dhigay kooxaha qaramada qaaradda Yurub, kadib markii ay xalay ku guuleysteen koobka Euro 2016, oo lagu marti galiyay Faransiiska.
Portugal, oo markii ugu horreysay hanatay koobkan ayaa dadaal dheer u soo gashay inay libinta qaadato, waxaana dadaal dheeri ah muujiyay xidigaha qaranka Portugal, oo aad mooday inay isu soo dardaarmeen yaana nagala badin.
Libaaxa ay ku tashadaan Portugal Cristiana Ronaldo ayaa jug ka soo gaartay ciyaarta wuxuu daqiiqadii 25-aad codsaday in garoonka laga saaro, maadaama uu awoodi waayay inuu sii watto hardankiisa ciyaareed.
Laakiin beddelka CR7, wuxuu awood dheeri ah siiyay xulka Portugal oo soo gelitaanka Quaresmo, u arkay fursad cusub oo ay ku badin karaan, waxaana xowli noqotay kubad heysashadooda iyo baasaska cajiibka ah ee ay is dhaafsanayeen labada qaran.
Xidigaha xulka Faransiiska, ayaa iyana waxay wadeen hardan adag, waxaana isku dayo badan sameeyey Xidigga ku guuleystay gool dhalinta Euro 2016, ee Griezman.
90-kii daqiiqo ee ciyaarta waa ay ku kala bixi waayeen Portugal iyo France, waxaana loo baahday in daqiiqado dheeri ah lagu daro, waxaana farxad dareemay taageerayaasha Burtiqiiska kadib gool uu dhaliyay Eder.
Oohintii Ronaldo ee dhaawaca soo gaaray ayaa isu bedeshay oohin farxadeed, waxaana markii ugu horreysay taariikhda uu CR7 xulkiisa qaran u soo hooyay koobkan, wuxuuna taas uga mahad celinayaa xidigga Nani oo markii kabtanka loo xiray geesinimo muujiyay.
More in Ciyaaraha
Paul Pogba oo tijaabada caafimaad u maraya kooxda Manchester United August 8, 2016
Koobka Fedraalka “Ammaan iyo dhaliil” August 4, 2016
Sh/dhexe/Hiiraan oo 2-1 uga badiyay Jubbaland July 16, 2016